होम आइसोलेसनमा कसरी गर्ने उपचार ? यस्तो छ मार्गनिर्देशन - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
होम आइसोलेसनमा कसरी गर्ने उपचार ? यस्तो छ मार्गनिर्देशन
प्रकाशित मिति: 1 May, 2021 9:19 am
यसमा कोरोना कोरोनाको कुनै लक्षण नभएको विरामीहरूले घरमा हुँदा उनीहरूले कसरी उपचार गर्न सक्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी दिइएको छ । दोस्रो बालबालिकाको सम्बन्धमा बताइएको छ । जसअनुसार निम्न अनुसार कुराहरू उल्लेख छ :
डाक्टरले तपाईलाई नन्स्ट्रोइडल एन्टी–इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जस्तै नेप्रोक्सेन (२५०mg दिनमा दुईपटक) लिन सल्लाह दिन सक्छ । यसबाहेक, डाक्टरले तपाईंलाई ३ देखि ५ दिनका लागि आइवमेक्टिन ट्याबलेट (दिनमा एक पटक mcg/kg, खाली पेट) पनि दिनसक्छ ।
बालबालिको घाँटी दुख्नु, रुघाखोकी लग्नु र पेटसँग सम्बन्धित सामान्य लक्षणहरु देखिएमा घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल (१०–१५ mg/kg/डोज) हरेक ४ देखि ६ घण्टाको बिचमा दिइन सल्लाह दिइएको छ ।
प्रोटोकोलका अनुसार थ्रोम्बोसिस, हेमोफागोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस (HLH) र अर्गन फेल्योरको परीक्षण गराउनुपर्दछ । गाइडलाइनमा यी बालबालिमा कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, लिभर, किड्नीले गर्ने काम र छातीको एक्स रे गर्ने सल्लाह दिइन्छ ।
सोलुखुम्बुका ६ स्थानीय तह अक्सिजन सिलिन्डरविहिन
सोलुखुम्बु ।आठवटा स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुका ६ स्थानीय तह अक्सिजन सिलिन्डरविहीन रहेको पाइएको छ ।
बिहेमा गएका एक युबकले सारे ३० जनालाई कोरोना, युवकसहित तीनजना बिरुद्द मुद्दा दायर
एजेन्सी ।एउटा बिहेमा आएका एक जना सङ्क्रमितले अन्य ३० जनालाई संक्रमण सारेपछि पूरै गाउँ सिल